I-Silver Gardens - I-idyll yasemaphandleni, indawo entle yabantu abayi-8 - I-Airbnb
I-Silver Gardens - I-idyll yasemaphandleni, indawo entle yabantu abayi-8
Ifama sinombuki zindwendwe onguSølvane Gard
Nceda ufunde ngefama kwiwebhusayithi yethu ngaphambi kokubhukisha!
Velkommen til det koselige, blå huset i Kandal. Apha intsapho yonke inokuphumla kwindawo ethe cwaka, inyuke iintaba, okanye iye kwiikonsathi, izidlo zangokuhlwa kunye nemicimbi eSilverane Gard.
Le ndlu ime kwindawo entle ekuthiwa yiKadal, kufutshane neLake Bremsvatn. Phola kwindawo epholileyo ngoxa wonwabele ukubuka iindawo ezithi ndijonge! Idolophana yaseKadal inabemi abamalunga ne-60 kuphela, ngoko ukuhlala kwakho apha kuza kuba yinto ethe cwaka kwaye ezolileyo!
Abaqeshi banendlu yonke. Kukho iibhedi ezilala abantu ababini eziyi-4 ezamkela iindwendwe eziyi-8. Igumbi lokutyela labucala, indawo yokuphumla yeTV, igumbi lokuhlambela nekhitshi. Indawo enkulu engaphambili kwendlu enesidlo sakusasa esitofotofo okanye isidlo sangokuhlwa esitofotofo.
Ukupaka kweemoto eziyi-2.
Iivenkile ezikufutshane zikumgama wemizuzu eyi-20. Ungalibali ukuzisa zonke izinto zokutya njl. E-Silverane Gard ungathenga inyama nokutya okuqikelelwayo kwimveliso yakho.
I-Silverane Gard iba neekhonsathi, izidlo zangokuhlwa, kunye nemicimbi ebudeni bonyaka. Hlala ujonge kwiwebhusayithi okanye kumajelo onxibelelwano kusuku olulandelayo.
Ingxolo yaseKadal yinxalenye ebalulekileyo yento ezinokuyonwabela yeendwendwe zethu. Dibana neebhokhwe, iigusha, mhlawumbi ihashe kunye neenkukhu kwi-Myklandsstølen ekwikhilomitha ezimalunga neziyi-6 ukuya entlanjeni. Ungaqhuba ngemoto yonke ukuya phezulu, okanye uhambe malunga neeyure eziyi-1,5.
Indlu eluhlaza yiyunithi eyi-1 kweziyi-13 eziqeshisayo kwi-Silver Gard. Sineebhedi zeendwendwe ezimalunga ne-40.
Le ndlu ime kwindawo entle ekuthiwa yiKadal, kufutshane neLake Bremsvatn. Phola kwindawo epholileyo ngoxa wonwabele ukubuka iindawo ezithi ndijonge!
Kukho indawo enkulu yabantu abayi-8. Indlu inamagumbi okulala ayi-4, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokutyela negumbi lokuhlambela .
Ityeya enkulu kunye negadi. Indawo yokupaka imoto.
Indlu yonke isetyenziswa nguwe wedwa. Indlu ikulungele ukuqeshisa, sihlala efama ngasemnyango .
Indawo emangalisayo. Indalo ekhethekileyo. Le ndlu ikufuphi nefama yethu ibe uvimba umalunga ne-10m ngaphaya kwendlu.
Akukho venkile, iikhefi okanye ezinye iivenkile eziseKadal, ngoko konke ukutya neziselo kufuneka zinikezelwe. Iivenkile ezikufutshane ziseSandane okanye eReed ( malunga nemizuzu eyi-20) Idolophana yaseKadal inabemi abayi-60 kuphela, ngoko ukuhlala kwakho apha kuza kuba yinto ethe cwaka kwaye ezolileyo!
Le ndlu yinxalenye yeSølvane Gard apho sihlala khona. Ifama yethu yebhokhwe isecaleni kwendlu eqeshisayo.
Ngexesha lasehlotyeni ungadibana neebhokhwe zethu kwifama yobisi yasezintabeni, imizuzu eyi-10 ukunyuka entlanjeni. Iibhokhwe zabantwana zisefama yethu.
Sinezinye izindlu zamaplanga eziqeshisayo kwindawo enye. Jonga iinkcukacha zethu. Nceda ufunde ngefama kwiwebhusayithi yethu
4.87 · Izimvo eziyi-176
Ukuhamba nokunyuka intaba, ukuloba. Ukuzalisa, iibhokhwe, iigusha kunye namahashe.
Ininzi into onokuyenza uze ubuke iindawo e-Kadalen. Intlambo intle xa unyuka intaba naxa uhamba ngeenyawo. Ukuba ulandela umlambo, sinefama yebhokhwe kwintlambo onokuyityelela. Iibhokhwe ziyakuthanda ukuphakwa zize zidityaniswe nazo. Yimizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto ukusuka endlwini, okanye iyure eyi-1 xa uhamba ngeenyawo.
Ukuba uqhubeka iimitha ezingamakhulu ambalwa ngaphaya kwefama yebhokhwe kukho intlambo entle eneengca, imilambo, amadlelo neendlela ezincinci. Umlambo ucacile kwaye ukuba ujonga ngokusondeleyo ungabona ukuqubha uze udlale emanzini.
Xa imozulu intle ungaya kubhukuda elunxwemeni kwimizuzu nje embalwa xa uhamba ngeenyawo ukusuka endlwini. Ichibi liphinde libe lihle ukulibuka ngokuhamba ngephenyane ukuba uza nekayak yakho.
ISandane, idolophana ekufutshane ye-lokal ineevenkile, iivenkile kunye nezinye iivenkile zokutyela kunye neevenkile zekofu. I-Theres ikwayimyuziyam yesintu apho equka enye yezindlu zethu ezindala ukusuka efama.
Le ndlu ilungiselelwe ngokupheleleyo ukuba iqeshwe. Sihlala kwindlu esecaleni ngasemnyango.
Xa ufika kwaye uyagxothwa kwaye xa ucelile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sandane